ဖိလစ်ပိုင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ တစ်ရက်အလိုတွင် လက်ပစ်ဗုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရ၍ လူ ၈ ဦး ဒဏ်ရာရ - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ တစ်ရက်အလိုတွင် လက်ပစ်ဗုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရ၍ လူ ၈ ဦး ဒဏ်ရာရ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မက်ထရိုမနီလာမြို့တော် Quezon City မြို့၌ ဒုတိယသမ္မတလောင်း Leni Robredo ကို ကြိုဆိုနေကြသည့်၎င်းအား ထောက်ခံသူ လယ်သမားများအား ၂၀၂၂ ခုနှစ်မေ ၁ ရက်အလုပ်သမားနေ့တွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-အင်တာနက်)
မနီလာ ၊ မေ ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ ၂၀၂၂ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီတစ်ရက်အလို မေ ၉ ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်း)တွင် နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ Maguindanao ပြည်နယ်၌ လက်ပစ်ဗုံးဖြင့် ပစ်ပေါက် တိုက်ခိုက်ခံရမှုများအတွင်း အနည်းဆုံး လူ ၈ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုသည်။Datu Unsay မြို့တွင် လက်ပစ်ဗုံး ပေါက်ကွဲမှု လေးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အခြားတစ်ကြိမ်မှာ အနီးအနားရှိ Shariff Aguak မြို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အဖွဲ့ကမျှ ၎င်းတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားခြင်း မရှိပေ။ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်မှု “ပစ်မှတ်ထားနေရာများ” ဟု ယူဆထားသည့် နေရာများတွင် ရှာဖွေရေးများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းတိုက်ခိုက်မှုသည် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်ကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရသူအချို့မှာ ရွေးကောက်ပွဲ မဲရေတွက်စက်များ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပေးရမည့် ဆရာဆရာမများ နှင့် ဒေသတွင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ထောက်ခံအားပေးသူများ ဖြစ်ကြကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ယာယီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ John Rex Laudiangco က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားရာတွင် အခင်းဖြစ်နေရာအနီးတစ်ဝိုက်တွင် အခြေအနေများကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးမှုများကို စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ သမ္မတသစ်တစ်ဦး ၊ ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦး ၊ ဆီးနိုတ်လွှတ်တော်အမတ် ၁၂ ဦး ၊ အောက်လွှတ်တော်အမတ် ၃၀၀ ကျော် နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိ ၁၇,၀၀၀ ဦး တို့ကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်နိုင်ရန် ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူ ၆၅.၇ သန်းကျော်က ယနေ့ မေ ၁၀ ရက်တွင် မဲပေးရွေးချယ်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
8 injured in Philippine election eve grenade explosions
MANILA, May9(Xinhua) — Police said at least eight persons were hurt inaseries of grenade explosions in Maguindanao province in the southern Philippines on Sunday night, the eve of the general elections.
Police said four explosions hit Datu Unsay town and another one hit nearby Shariff Aguak town.
No group has claimed responsibility for the explosions. Police are looking into the attacks in the areas tagged as “hot spots.”
Local authorities said the attack could be election-related, adding that some of those injured were teachers awaiting the release of vote-counting machines and supporters of local candidates.
John Rex Laudiangco, acting spokesperson of the Commission on Elections, toldanews conference that the situation in the area is under control, and that voting would push through as scheduled.
Over 65.7 million Filipinos will vote on Monday to electanew president,anew vice president, 12 senators, more than 300 members of the House of Representatives, and over 17,000 local officials. Enditem
Photo – Farmers from Sumilao, Bukidnon province cheer before the arrival of Philippine Vice President and presidential candidate Leni Robredo, ataLabor Day celebration, in Quezon City, Metro Manila, Philippines, May 1, 2022.
ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကယ်ရီလမ်းက ဂျွန်လီအား ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းအပေါ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြု
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အားကောင်းသော ကိုဗစ်လုံးဝကင်းစင်ရေး မူဝါဒက ပြည်သူများ၏ အသက်ရှင်သန်မှုအား ကာကွယ်ပေးရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း ကမ္ဘာဒီးယားပညာရှင်ပြောကြား
ပြင်သစ် လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မက်ခရွန်အတွက် အပြည့်အဝ ထောက်ခံမှုအများစု မရရှိကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ပြောကြား